इरिटेबल बोवेल (IBS) | कारण, लक्षण, निदान, आहार, उपचार
इरिटेबल बोवेल (IBS) | कारण, लक्षण, रोकथाम र उपचार
इरिटेबल बोवेल सिन्ड्रोम पाचन रोग हो जुन स्पास्टिक कोलोन, इर्रिटेबल बोवेल सिन्ड्रोम, म्यूकोस कोलाइटिस र स्पास्टिक कोलाइटिसको रूपमा पनि चिनिन्छ। इरिटिबल बोवेल सिन्ड्रोमले पेटको पेट, पेट फूलन (पेट 'फूलिएको', कब्ज र पखाला) को कारण बनाउन सक्छ। यहाँ तपाईं कारणहरू, लक्षणहरू, रोकथाम, आहार, आत्म-उपाय र ईरिटियल बोवेल सिन्ड्रोमको उपचारको बारेमा बढी सिक्नुहुनेछ।
धेरै भन्दा बढी नर्वेको जनसंख्याको to देखि २० प्रतिशत चिडचिड आंत्रले असर गर्न सक्छ। केहि क्षणिक, तर धेरैलाई दीर्घकालीन आन्द्रा समस्याहरू पनि भनिन्छ - तथाकथित दीर्घकालिक ईरिटियल बोवेल। अवस्था पुरुषलाई भन्दा धेरै पटक महिलालाई असर गर्छ र लक्षण र रोगको सम्बन्धमा भिन्न हुन सक्छ। कन्डिसन पनि भनिन्छ ईरिटेल बोवेल सिन्ड्रोम.
चिढचिढो आंत्र भनेको के हो?
कस्तो प्रकारको लक्षण र पीडाले ईरिटियल आन्द्रा उत्पन्न गर्दछ
पुरुषहरूमा चिडचिलो आंत्रको लक्षण
महिलामा चिडचिड आंत्रको लक्षण
कारण किन कोही चिढचिढो आंत्र सिन्ड्रोमबाट ग्रस्त छन्
ईर्रिटेबल बोवेल सिन्ड्रोमको लागि ट्रिगरहरू
चिडचिड आंत्रको निदान
चिडचिलो आन्द्राको लागि आहार
चिडचिडा मल त्यागको उपचार
मल त्याग बिरुद्दको आत्म-उपाय
चिडचिड आंत्र र सम्बन्धित रोग (तनाव, कब्ज, पखाला र वजन घटाउने सहित)
यस लेखमा तपाई चिड़चिढ्ने मल, र यस क्लिनिकल अवस्थाको कारण, लक्षण, आहार र उपचारको बारेमा बढी सिक्न सक्नुहुन्छ।
चिडचिड बोल्ने लक्षण
त्यहाँ धेरै विशेषता लक्षणहरू र ईरिटिजियल आन्द्रा र पाचन समस्याहरूको संकेतहरू छन्। केहि सब भन्दा सामान्य समावेश:
पेट फुलाएको जस्तो लाग्छ
ग्यास र पेटमा सूजन
यो चिडचिलो आन्द्रा हुनेहरूका लागि कब्ज र पखाला को संयोजनको साथ एपिसोडहरू अनुभव गर्नु असामान्य कुरा होइन। - यद्यपि धेरै, परम्परागत रूपमा बोले, विश्वास गर्छन् कि एउटाले अर्कोलाई छोडिदिन्छ। यो अवस्था पनि छ कि इरिडियल बोउल सिन्ड्रोमका लक्षणहरू धेरै माथि र तल कहिलेकाहीं जान्छन् - जहाँ निश्चित अवधिहरू खराब मात्र हुनसक्दछन् र अन्य अवधिहरू वास्तवमै एसिम्प्टोमेटिक हुन सक्छ। तर माथि उल्लेख गरिएझैं धेरै मानिससँग चर्को इर्नरिट बोवेल सिन्ड्रोम हुन्छ। ईरिटेल बोउल सिन्ड्रोमसँग निदान गर्न, एक व्यक्तिले कम्तिमा तीन महिनाका लागि प्रत्येक महिना तीन भागका साथ एपिसोडहरूको अनुभव गर्नु पर्छ।
यो पनि सत्य हो कि चिडचिलो आन्द्राको लक्षण व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्ति र लिंग बीचमा केही फरक हुन सक्दछ। महिलामा, लक्षणहरू प्रायः हार्मोनल पीरियडको बखत बिग्रन थाक्छ - विशेष गरी मासिक चक्रको सम्बन्धमा। यो पनि ज्ञात छ कि रजोनिवृत्ति भएका महिलाहरुमा अझै पनि मासिक धर्म लाग्ने महिलाहरु भन्दा कम आन्द्रा समस्याहरु छन्। त्यहाँ रिपोर्टहरू पनि छन् कि केहि महिलाहरूले गर्भावस्था र गर्भावस्थाको सम्बन्धमा असुविधा बढेको छ।
पुरुषहरुमा चिडचिड बोल्ने लक्षण
ईरिटिबल बोवेल सिन्ड्रोमका लक्षणहरू धेरै जसो पुरुषहरूमा समान हुन्छन् - तर त्यसो त यसपछि डाक्टरमा जानुपर्ने हुन्छ। पुरुषहरू वास्तवमै यसप्रकारका मुद्दाहरू र मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा खराब हुन्छन्।
थप पढ्नुहोस्: - पेट क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षण
पेट दुख्ने र इरिटिएबल बोवेल सिन्ड्रोम
धेरै मानिसहरु दुखाइ को वर्णन गर्छन् उनीहरु चिडचिडो आंत्र सिंड्रोम को साथमा ऐंठन को रूप मा र पेट "कडा" को रूप मा अनुभव। पेटको दुखाइको ईर्ष्यात्मक आंत्रको कारणले गर्दा सामान्य विवरणहरू:
त्यो पेट पेटको छ
यी दुखाइहरु संग संयोजन मा, तपाइँ प्राय: कि बाथरूम मा जाँदै "दबाव कम" र दुखाइ कम हुनेछ। तपाईं प्राय जसो बाथरूम जानको लागि परिवर्तन पनि देख्न सक्नुहुनेछ र यो देख्नुहुन्छ कि मल कसरी देखिन्छ।
कारण: किन कोही चिड़चिलो आंत्र रोग बाट पीडित छ?
इरिटेल बोवेल सिन्ड्रोमको सही कारण अझै पूर्ण रूपमा थाहा छैन। वैज्ञानिकहरु यो विभिन्न कारणले हुन सक्छ विश्वास गर्छन्, तर विशेष गरी यो एक अवरोध प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रणाली र अत्यधिक आन्द्रा को कारण हो भनेर सिद्धान्तहरु को विरुद्ध हो। यो पनि ज्ञात छ कि आन्द्राको पछिल्लो ब्याक्टेरियाको सूजन यस्तो बिरामीको कारण हुन सक्छ। इरिटेन्ट मलको धेरै सम्भावित कारणहरू छन् भन्ने तथ्यले यसले हिट हुनबाट रोक्न गाह्रो बनाउँछ।
धेरै शारीरिक प्रक्रियाहरूमा जुन कि ईरिट्रेन्ट बोवेलको कारणले, हामी फेला पार्दछौं:
हल्का सेलिआक रोगले आंतहरूलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ र चिडचिलो आंत्र हुन सक्छ।
ढिलो वा स्पास्टिक मलको आन्दोलन - जसले पेटमा दर्दनाक ऐंठनलाई जन्म दिन्छ। यस्तो उन्नत गतिविधि शरीरमा तनावको स्तरमा पनि देख्न सकिन्छ।
आन्द्रामा असामान्य सेरोटोनिन स्तर - जसले कार्यलाई असर गर्छ र कसरी मलहरू आंताहरू मार्फत सार्दछ।
थप पढ्नुहोस्: - तपाईले तनावको बारेमा कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ
(यो लिंक नयाँ विन्डोमा खुल्छ)
इर्रिटेबल बोवेल सिन्ड्रोमको लागि ट्रिगरहरू
त्यहाँ धेरै ज्ञात ट्रिगरहरू हुन् जसले दुबै कारण ईरिडिटिबल बोवेल सिन्ड्रोम बिगार्दछ। यसको मतलब यो पनि हो कि चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम को "फ्लेयर अप" लाई रोक्न को लागी साँचो यी ट्रिगरहरु बाट बच्न मा निहित छ। यो विशेष गरी तनाव, चिन्ता र खाना को विभिन्न प्रकार (जस्तै ग्लुटेन र ल्याक्टोज) हो कि सबैभन्दा राम्रो चिडचिडा आंत्र लक्षण ट्रिगर को लागी जानिन्छ।
र यो सत्य हो कि यो मान्छेले प्रतिक्रिया गर्ने खानाको प्रकार अनुसार फरक हुन्छ। यदि यो पहिले नै पर्याप्त जटिल थिएन। उदाहरण को लागी, केहि आन्द्रा लक्षणहरु केहि प्रकारको खालको माछा र सेतो रोटी खाएको कारणले हुन सक्छ, जबकि अर्कोले दुधमा मात्र प्रतिक्रिया दिन्छ। हामी दृढताका साथ सिफारिश गर्दछौं कि तपाईं खाना डायरी राख्नुहोस् तपाईंले कस्तो प्रकारको खाद्य पदार्थहरूको प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ।
तनाव र चिन्ता अन्य कारकहरू हुन् जसले वास्तवमै तपाईंको पेट र आन्द्रालाई गलत बनाउन सक्छ। तसर्थ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं आफैंको लागि समय लिनुहोस् र व्यस्त दिनमा तनाव र अराजक अवस्था कम गर्न कार्य गर्नुहोस्। त्यस्ता केही उपायहरूमा प्रशिक्षण, वन पैदल, योग वा तातो पानी पोखरी मा प्रशिक्षण। केही उल्लेख गर्न।
यो पनि पढ्नुहोस्: - स्ट्रोकको लक्षण र लक्षणहरू कसरी पहिचान गर्ने
इरिटिएबल बोवेलको निदान
चिडचिड आंत्रको निदानको लागि, तपाइँको डाक्टरले पहिले पूर्ण इतिहास (इतिहास) लिनेछ। त्यसो भए त्यहाँ धेरै तरीकाले पत्ता लगाउन के तपाइँ तपाइँको लक्षण पैदा भइरहेको छ:
मल परीक्षण: मल विश्लेषणले संक्रमण र सूजनको लागि जाँच गर्न सक्छ।
रक्त परीक्षण: फलामको कमी र तपाईंलाई हुन सक्ने अन्य खनिज कमीहरूको लागि हेर्न प्रयोग गरियो।
कोलोनोस्कोपी: तपाईको लक्षण कोलाइटिस, क्रोहनको रोग वा क्यान्सरको कारण हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्न प्रयोग गरिएको विशेष परीक्षण।
डाइट डायरी: तपाईको डाक्टरले तपाईलाई के खान लेख्ने भनेर सोध्न सक्छ - र तपाईको आन्द्रा बानीहरू (जस्तै तपाई बाथरूममा जानुहुँदा र तपाईको मल जस्तो देखिन्छ)।
फोक्सोमा हुने रगतको थक्का घातक हुन्छ। यदि यो शंका हो भने, आपतकालीन कोठामा तुरून्त सम्पर्क गर्नुपर्नेछ।
चिडचिडा मलको उपचार
हामी इरिटियल आन्द्राको उपचारलाई चार मुख्य श्रेणिहरुमा विभाजन गर्न सक्दछौं।
डाइट: स्वस्थ पेटको कुञ्जी आहारमा निहित छ। यहाँ हामी तपाईलाई खाने को किसिमको आन्तरिक समस्याहरू प्रदान गर्दछ र तिनीहरूलाई काट्नको लागि एक व्यापक सर्वेक्षणको बारेमा कुरा गर्दैछौं - एकै समयमा तपाईले आन्तरिक प्रणाली (जस्तै किण्वित खाद्य पदार्थ र प्रोबियटिक्स) मा कागजातको राम्रो स्वास्थ्य प्रभाव पार्ने खाद्य पदार्थहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ। यसले प्रो-इन्फ्लेमेन्टरी फूडहरू काट्नका लागि पनि लागू गर्दछ जुन आंताहरूमा भडकाउने प्रतिक्रियाहरूमा बढि योगदान पुर्‍याउँछ।
लागूपदार्थ: यदि तपाई अधिक कडा डाइटको जवाफ लिनु भएन भने दवाईहरु दिन सकिन्छ। कब्ज र पखाला को लागी औषधीले तपाईको भ्रमणको आवृत्ति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दछ।
प्रोबायोटिक्स: प्रोबायोटिकको मतलब हाम्रो खाना र पेय पदार्थ हो जुन तपाईंको पेटको भित्र स्वस्थ ब्याक्टेरियाको वनस्पतिलाई उत्तेजित गर्दछ। तपाईले पनी आफ्नो किराना स्टोरमा दही उत्पादनहरू किन्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई स्वस्थ जीवाणु फ्लोरा लिन सहयोग पुर्‍याउन।
तनाव न्यूनीकरण: तनावले आन्द्रामा शारीरिक प्रतिक्रिया दिन्छ। तसर्थ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले दैनिक जीवनको तनावलाई गम्भीर रूपमा लिनु हुन्छ - र तपाई आफैंको लागि डि-स्ट्रेसको लागि समय छुट्याउनुहुन्छ।
पाचन रोगको कुञ्जी सुधारिएको आहारमा निहित छ। के तपाई सायद सहमत हुनुहुन्छ? हामी एक विरोधी भड़काउने आहार सिफारिस (उदाहरण को लागी) यो) जसमा तरकारीहरू र पौष्टिक खानाहरूको उच्च सामग्री छ।
चिड़चिलो आंत्रको बारेमा ज्ञान साझा गर्न नहिचकिचाउनुहोस्
पुन: प्रयोज्य जेल संयोजन गास्केट (गर्मी र चिसो गस्केट)
तातो र दुखाइ मांसपेशिमा तातो रक्त परिसंचरण बढाउन सक्छ - तर अन्य परिस्थितिहरुमा, अधिक तीव्र दुखाई संग, शीतलन को सिफारिस गरीन्छ, किनकि यसले पीडा संकेतको प्रसारणलाई कम गर्दछ। यी पनि एक कोल्ड प्याक को रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ को कारण को सूजन शान्त गर्न, हामी सिफारिस गर्दछौं।
यहाँ थप पढ्नुहोस् (नयाँ विन्डोमा खुल्छ): पुन: प्रयोज्य जेल संयोजन गास्केट (गर्मी र चिसो गस्केट)
आवश्यक परे भ्रमण गर्नुहोस्तपाईंको स्वास्थ्य स्टोरSelf आत्म-उपचार को लागी अधिक राम्रो उत्पादनहरु हेर्न को लागी
अर्को पृष्ठ: - यो तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ तपाई रगतको थक्की छ भने
इरिटिएबल बोवेल र IBS को बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू